Cryptopay Debit Kaadị Review - Bitcoin Card Comparison 2018
Cryptopay Debit Kaadị Review
Cryptopay na-enye ụzọ dị mfe iji na-eji gị bitcoins n'ụwa nile. Ọrụ nwere ike irite uru na uru nke bitcoin netwọk mgbe streamlining ego nsụgharị na hedging megide ahịa mmegharị. The ọrụ awa Cryptopay enye ndị ọrụ ngwa ngwa na ala ohere Bitcoin ịkwụ ụgwọ. The visa debit kaadị nyere site ụlọ ọrụ na-kụziri na bitcoin ana na ndị mmadụ nwere ike iji elu na online ịzụrụ ma ọ bụ withdrawals si ATMs.
Bitcoin Debit Kaadị Cryptopay
Services nyere Cryptopay
Ọrụ nwere ike ịzụta, ere na ụlọ ahịa na bitcoins na Cryptopay si bitcoin obere akpa Flex akaụntụ. Mgbe ejikọta na akụ n'elu ikpo okwu, ọrụ nwere ike tọghata EUR, GBP ma ọ bụ USD ana n'ime bitcoins. The obere akpa e mere na a ụzọ ka ndị ahịa na-echekwa dị iche iche ego ichekwa n'ime otu akaụntụ. Nke a na-eme ka na izipụ na inweta ego si mba ọzọ a ọtụtụ ihe ọma na ahụmahụ.
Cryptopay mbipụta visa Debit kaadị na-enye offline emefu ohere maka ndị owning bitcoins. Kaadị anabatara niile naa ọnụ ebe visa kaadị na-anabata. Nke a pụtara ahịa nwere ike ma na-akwụ online ma ọ bụ offline na ọtụtụ nde ndị ahịa n'ụwa nile na-. E wezụga na omenala visa kaadị nwere ibe na mkpọ niile, ọrụ nwekwara ike ịtụ virtual kaadị, nke na-anabata dị ka n'ọtụtụ ebe dị ka ndị plastic kaadị.
The akụkọ ọtùtù nwere ike topped elu na nkịtị akụ na-enyefe. Bank akụkọ eruo n'ime 28 SEPA mba Europe, ma kaadị nwere ike nye iwu na mpụga nke Eurozone kwa. N'ebe a, ahịa na United States ma ọ bụ India na-adịghị ike ịtụ ndị debit kaadị nyere site Cryptopay. E wezụga United States, ụlọ ọrụ Ewezuga ihe ọzọ 120 mba si ha ọrụ, tinyere di na nwunye nke mba na Africa na Middle-East.
The visa debit kaadị na-Ẹnam ekese mba free ma ọ bụrụ na ọkọlọtọ ọrụ na họrọ. Mgbe iji na-mere site na website, ahịa na-enweta ihe debit kaadị n'ime 2-3 izu Europe na 3-5 izu ike nke okwu. Bụrụ na nke awara awara nnyefe nhọrọ a họọrọ, ahịa nwere ike na-enweta iwu kaadị n'ime 3-10 ụbọchị n'ihi ihe ngafe ego nke 75 USD.
Plastic kaadị na-eri 15 USD, virtual kaadị bụ 2.5 USD. The plastic kaadị ekwe Verified ọrụ ịdọrọ kwa ụbọchị 2,000 USD si ATMs e 10,000 USD ịgba na otu n'elu acha ọkụ. Otú ọ dị ọ dịghị ịgba abughi na ngụkọta withdrawals, ma ọ bụ na top elu ichekwa na itinye itule.
Cryptopay awade ọ bụ onye ọrụ isi nhọrọ iji ya ọrụ na-enweghị nkwenye kwa. Na ikpe Otú ọ dị ókè maka igwe ndọrọ ego withdrawals na topups ndị budata nta. Mkpuke ọrụ nwere ike ịdọrọ 400 USD kwa ụbọchị site ATMs, ma naanị na a ngụkọta ego nke 1,000 USD ofụri ndụ nke ohere.
N'ihi na ma kwupụtara na unverified ọrụ, ahịa na-enwe ike ịdọrọ ego si igwe ndọrọ ego naanị ugboro abụọ n'ụbọchị. On n'akụkụ nke ọzọ, ma ụdị ọrụ nwere ike iji Cryptopay debit kaadị na-akparaghị ókè oge online ịzụrụ.
Cryptopay ebubo 1% na niile bitcoin akakabarede si na n'ime fiat ego. The dị ọnụ ala ụzọ bụ iji mara na akaụntụ itule na na-na saịtị Cryptopay loading ngwá ọrụ, n'ihi na ma ọ bụghị n'elu ikpo okwu ebubo ọzọ 0.99% maka iji atọ ndị ọzọ ọrụ. N'ihi na ebutu kaadị e nwere ihe mmezi ego nke $ / € / £ 0.10 n'akuku 1% ana.
Ọrụ ga ntị ka isi ego nke Cryptopay kaadị dị ka e nwere ihe ọzọ 3% ana ọzọ na azụmahịa. Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịdọrọ ego na a dị iche iche ego karịa ndị isi ego nke kaadị a 3% mba ọzọ azụmahịa ego a na ebubo.
The ego nke igwe ndọrọ ego withdrawals maka anụ ụlọ na mba na azụmahịa na euro bụ otu € 2.25. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ndị isi ego nke Cryptopay kaadị bụ dị iche iche karịa ihe igwe ndọrọ ego na-enye, e nwere a elu ego maka mba azụmahịa na GBP na USD.
The bitcoin ahịa na-adịghị ahịa na ihe adịchaghị na ikele / enye oke bụ ihe ezi uche. Ọmụmaatụ, Cryptopay nyere bitcoins maka 775.84 - 783.49 USD ikele-ajụ, mgbe BTCUSD price bụ 785.94 na Coinbase na 779.67 na Bitstamp.
E nwere ọnụ ọgụgụ nke ụgwọ na-na ọdabara maka tinye n'ọrụ na itinye Cryptopay debit kaadị.
Cryptopay Plastic emere Card – Price na Ụgwọ
Kaadị price na ụgwọ
kaadị price € 15,00 £ 15,00 $15.00
Standard n'ụwa nile nnyefe Free Free Free
Gwa n'ụwa nile nnyefe € 70,00 £ 50,00 $75.00
Domestic igwe ndọrọ ego Azụmahịa € 2,25 £ 1,75 $2.50
International igwe ndọrọ ego Azụmahịa € 2,75 £ 2,25 $3.50
Foreign azụmahịa ego 3% 3% 3%
Monthly ọrụ ego € 1.00 £ 1.00 $1.00
loading ego 1% 1% 1%
-Atọ ndị ọzọ loading ego 1.99% 1.99% 1.99%
Cryptopay Virtual emere Card – Price na Ụgwọ
kaadị price € 2,50 £ 2,50 $2.50
Cryptopay si website nwere a mma n'anya, n'otu-acha anụnụ anụnụ anya. Igodo bụ pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ na saịtị.
Ndebanye na-ewe otu nkeji. Mgbe na-enye aha, email adreesị na paswọọdụ, ọrụ nwere ike nbanye n'ime ikpo okwu. Iji nyochaa akaụntụ ọrụ ga-eweta a ọchịchị nyere ID kaadị (paspọtụ, mba ID ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala ikike) na a na-egosi nke residency. N'ihi ihe àmà nke residency akụ na nkwupụta, na ịba uru ụgwọ, tax laghachi ma ọ bụ ọchịchị nyere akwụkwọ nke residency a na-anabata. Nkwenye na-ewe nanị awa ole na ole.
Mgbe nbanye, ọrụ nwere ike na-ele itule nke akaụntụ. Onye ọ bụla ego (EUR / GBP / USD) e nyere a iche iche bitcoin address ebe ahịa pụrụ Ibu Ibu bitcoin ọtùtù. E nwere dị iche iche na taabụ maka ebufe ego Bitcoin adreesị, maka loading na ebutu kaadị. -Ọtùtù nwere ike napụrụ ọzọ bitcoin wallet ma ọ bụ na njikọ akụ akụkọ n'okpuru Send ngalaba. Ntuziaka tab Ka anyị na ndị ọrụ na-akpọ ndị enyi na ọrụ iji nweta a 10% revenue òkè mgbe enyi nwere ike iji Cryptopay debit kaadị maka a 25% discount.
Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla na-ebilite, e nwere a search ọrụ na FAQ ngalaba. Cryptopay-awade ndụ chat support ma ọ bụrụ na ọ bụla mbipụta ike ga-egbo site email.
Ọrụ yiri ka amasị Cryptopay nke ukwuu. Ha ito azụmahịa echiche na ndị website. The naanị ọjọọ nzaghachi kwuru bụ na ahịa nkwado ọrụ UK oge mpaghara naanị na pụrụ ịbụ isi na-awa maka esenidụt ahịa.
Cryptopay Account ókè
Uru nke online azụmahịa
Unverified / kwupụtara €1,000.00 / Unlimited £800.00 / Unlimited $1,000.00 / Unlimited
-Atọ ndị ọzọ ibu dị
Unverified / kwupụtara No / Ee No / Ee No / Ee
Max otu n'elu-elu uru
Unverified / kwupụtara €1,000.00 / € 10,000.00 £800.00 / £ 8,000.00 $1,000.00 / $10,000.00
Max kwa ibu
Unverified / kwupụtara €1,000.00 / € 20,000.00 £800.00 / £ 16,000.00 $1,000.00 / $20,000.00
Max ndụ ibu
Max ndụ butuo
Ibu kwa ụbọchị
Unverified / kwupụtara 2 / Unlimited 2 / Unlimited 2 / Unlimited
Cryptopay.me e hiwere na October 2013 na abụọ na-eto eto bitcoin-anụ ọkụ n'obi. George Basiladze nwere MsC na ego, ọtụtụ nnyocha nyocha ahụmahụ na Russian ego sịrị na ihe na-omimi ọmụma nke ego na usoro. Dmitry Gunyashov nwere a 7+ afọ akụkọ ihe mere eme na-ewu e-azụmahịa ulo oru na-aga nke ọma jisiri mmepe ọrụ multiple ugwo usoro ke gara aga. The ụlọ ọrụ headquarter dabeere na London, ụmụ okorobịa na-ijikwa azụmahịa si UK n'oge. The ụlọ ọrụ esesịn nyere karịa 37,000 debit kaadị, ha nwere 167,000 arụsi ọrụ ike ọrụ okwu-n'obosara onye na-eduzi 100,000 azụmahịa kwa ọnwa na Cryptopay ọrụ.
Nnukwu abamuru nke Cryptopay bụ na ha na-enye ọrụ maka atọ bụ isi ego EUR, GBP na USD na ha na-mbupu na visa kaadị free uwa dum. The website a na-wuru ọma e. Otú ọ dị n'ihi na ndị ahịa oge bụ ubé n'elu nkezi tụnyere asọmpi, ọrụ ga-atụle ma ha ga-eji niile atọ ego ma o kwesịrị na-eme otú via Cryptopay.